Manjaro Linux 19.0 “Kyria” waxay la timid Linux 5.4, Xfce 4.14, KDE 5.17, Gnome 3.34 iyo in ka badan | Laga soo bilaabo Linux
Sii deynta nooca cusbooneysiinta cusub ee Manjaro Linux 19.0 ayaa lagu dhawaaqay loo yaqaan "Kyria. Qaabkan cusub Waxaa la soo bandhigay iyadoo la ilaalinayo Linux Kernel 5.4 LTS, nooca cusub ee Pacman 9.3 iyo sidoo kale cusbooneysiinta jawiyada kala duwan ee desktop-ka ee qaybinta wax ka qabata.
Kuwa aan aqoon u lahayn Manjaro Linux, waa inaad ogaataa in tani ay tahay qaybinta taas wuxuu ku saleysan yahay Arch Linux, laakiin waxay leedahay keyd u gaar ah. Qaybinta ayaa looga dan leeyahay inay ahaato mid saaxiibtinimo leh ilaalinta sifooyinka Archsida maareeyaha xirmada Pacman iyo taageerada AUR.
Qaybinta ayaa u taagan joogitaanka hawl rakibo oo fudud oo si fudud loo isticmaali karo, taageerida qalabka otomaatigga ah ee la ogaado iyo rakibidda darawalada lagama maarmaanka u ah hawlgalkooda.
Manjaro Linux waa qeybinta GNU / Linux kaas oo awood u leh inuu doorto qofka adeegsadaha ah marka loo eego Waa la soo dejin doonaa oo la rakibi doonaa, waxay si rasmi ah u leedahay XFCE, KDE, Gnome, Cinnamon iyo kuwa kale oo badan oo ay ku darsadeen bulshada.
Asal ahaan waa nidaam hawlgal bilaash ah oo loogu talagalay kombiyuutarada shakhsi ahaaneed oo diiradda saaraya sahlanaanta isticmaalka. Maaddaama Manjaro uu ku saleysan yahay 'Arch Linux', nidaamkani wuxuu kaloo adeegsadaa nooc horumarineed oo loo yaqaan "Rolling Release".
1 Maxaa ku cusub Manjaro Linux 19.0 “Kyria”?
2 Degso Manjaro Linux 19.0 "Kyria"
Maxaa ku cusub Manjaro Linux 19.0 “Kyria”?
Iyadoo la sii daayay nuqulkan cusub Nidaamka cusbooneysiinta, waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo adeegsadaha inuu ka fogaado inuu soo dejiyo GB dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta xirmada oo si fiican u bixisa sawir leh xirmooyinka ugu deggan ee hadda jira, illaa xilligan jiilkooda.
Xitaa midkaas baakadaha wali ka dhawrsan noocii hore waa Linux Kernel 5.4 LTS Waxay heli doontaa cusbooneysiin illaa 2022. Maaddaama ay tahay nooc taageero oo dheer, waxay sii wadaysaa inay hesho cusbooneysiinno waxaana ka wanaagsan in la sii wado nooca LTS.
Halka Pacman 9.3 uu helay xog cusub, Horumarinta Manjaro waxay faallo ka bixinayaan:
Iyada oo la adeegsanayo macaamil ganacsi xoog leh oo la isku halleyn karo, habkayaga cusboonaysiinta waa inuu ahaadaa mid aad u jilicsan hadda. Waxaan sidoo kale wanaajinay qiimeynta ku xirnaanta xirmooyinka GTK-UI-gaaga. Hagaajinta maareynta xirmada, waxaan awood u siineynaa snap iyo flatpak taageero ahaan.
Ku saabsan cusbooneysiinta in aan ka heli karno Manjaro Linux 19.0, waa kuwa ee deegaanka desktop in lagu soo bandhigay noocyadooda:
Xfce 4.14 taasina waxay sii ahaaneysaa dhadhanka calanka ee qeybinta. Qaabkan cusub Mawduuca cusub ee Matcha ayaa la soo saaray, iyo sidoo kale a muuqaal cusub "Profiles Profiles" taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay kaydiso oo ay kaydiso astaamaha muujinta isla markaana si toos ah u adeegsato astaamahan marka bandhigyadu ku xiran yihiin.
Dhinaca GNOME, waan ka heli karnaa GNOME 3.34 oo leh Manjaro gidaarkiisa firfircoon ee firfircoon, Qalab cusub oo loo yaqaan 'Gnome-Layout' iyo soo jiidasho loo isticmaalo dhadhankan ayaa ah Isdhexgalka ciyaarta isdhaxgalka ee Feral loogu talagalay cayaaraha wanaagsan iyo dulucda soo galitaanka cusub.
Deegaan kale ayaa ah, KDE Plasma 5.17 kaas oo ku yimaada muuqaal cusub, Codsiyada KDE 19.2.2, KDE Qaabdhismeedka 5.66.0 iyo nooc buuxa oo ah Breath2 mawduucyo ay kujiraan nuqulo iyo nuqullo mugdi ah, shaashad firiqsan oo xamaasad leh, Astaamaha Konsole, maqaarka Yakuake, iyo faahfaahin badan oo yar.
Riwaayad kale oo ka kooban Manjaro Linux 19.0 waa taageerada cusub ee lagu soo daray asal ahaan xirmooyinka snap iyo flatpak kaas oo lagu rakibi karo iyada oo loo marayo interface interface interface cusub Bax.
Kani waa qaab garaaf ah oo lagu maareeyo barnaamijyada Linux iyo xirmooyinka. Waxay awood u leedahay maareynta AUR, AppImage, Flatpak, Snap, iyo codsiyada websaydhka ah. Iyo inay tahay aalad aad ufiican oo lagu badalo Octopi.
Degso Manjaro Linux 19.0 "Kyria"
Ugu dambeyntiina kuwa xiiseynaya inay heli karaan nooca cusub ee Manjaro, waxay ku heli karaan sawirka nidaamka iyagoo tagaya bogga rasmiga ah qaybinta iyo qaybteeda soo dejintooda waxaad ka heli kartaa xiriiriyeyaasha si aad u soo dejiso mid kasta oo ka mid ah dhadhanka aad jeceshahay ama noocyada bulshada ee ku daraya bii'adaha kale ee desktop ama maareeyayaasha daaqadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Manjaro Linux 19.0 “Kyria” waxay la timid Linux 5.4, Xfce 4.14, KDE 5.17, Gnome 3.34 iyo in ka badan